gooni's Content - Page 2 - Somali Forum - Somalia Online
gooni replied to guuleedosman's topic in Politics
Meeshaada joog waxaa ka faa'iido badan is dhex-galka oo daawo badan ku jirto. Berigii hore hadaad dhado D.M yaa dhuuso mareeb ugaas ku doortay lama fahmi karin ujeedada ka dambaysa. Maantana waa arrin cajiib ah, waxaana loo fahmayaa inay beel kale iyo dal kale la joogaan. Xaaji Reer galbeedka aad la joogto waxay kuu maal galinayaan "dad kama daro" adigoon waxba la wadaagin diin,dhaqan iyo midab. Maxaad ku diidaysaa muwaadin kula mida difaaca dhulkana kula wadaaga?
Waa arrin aad u wanaagsan, laakiin waxaad ogaataan inay sida sacuudiga iyo south Africa oo kale uga shaqaystaan gobolada kale. Ma dhex galaan dadka meesha degan, guri kama iibsadaan, reerahooda iyo caruurtooda ma keenaan. 24'ka saac telefon bay ku hadlayaan sidii dad qurbo jooga waana dad aad u yaqaan ganacsiga hoose iyo dhexe, ka bilaw iibinta tusbaxa ilaa dukaanka dharka.
Jubaland waa maamul sin jaban, magac ahaan in loo ilaaliyo waa waajib federaali ah oo dastuurka waafaqsan. Codka jubaland waa daciif suga inta puntland hadlayso ama ayadaaba u hadasha inta badan waana gar wadcigu ku keenay. Farmaajo waxay ku haystaan albaabka gaaban aan ka hoos dusno hadaan beesha kore isku nahay, waana ka gar leeyihiin markaad fiiriso shirarka wax garadka dhaqanka ee usc. Farmaajo wuxuu doonayaa inuu furo albaab qaranimo oo furihii lagu furi lahaa uu daxalaystay, waa isku day fiican waxaana oran lahaa qabiil waxba kuu tari maayee horay u soco jaalle. Puntland waxay maamulada kale kaga duwantahay waa kala dambaynta masha-allaah. Waxay doortaan jufo aan cid ka xanaajin karta jirin afartii sanoba mar. Hadii ninka ay doortaan hurdo seexdo dhamaantood way la seexan. Hadii uu caroodana dhamaantood way la caroon. Waa arrin cajaa'ib ah in umad dhan nin kaligiis lagu gawraco iyo ra'yigiisa. Dhawr iyo labaatankii sano oo ay soo jirtay waxay masiirkii reer puntland la hoos gashay maamul curdan ah oo 5 bilood ka hor la xaar-xaaray. Soo ceeb ma'ahan inaan daawano hooyo qaawan? Khayr allaha siiyo qoor-qoor waa nin wax gal ah. Hadaba walaalaheen puntland dhaqan dumarka iyo halasoo caro celiyo siyaasad ma'ahan gaal ha laygu yeerana waa kasii liidataa. Furihii miiska yuu kor saaran yahay inay wax ku qabsato iyo inay wax diido labadaba waa u banaantahay. Waan door qiimo badan oo magaca puntland kor u qaadi kara. Talo ku socota odayaasha iyo inta wax galka ah ee reer puntland. Walaalayaal geedka soo fariista oo salka dhulka dhigga, gaal ma yaqaan sida geed loo hoos fariisto. Garwaaxiidsada sidii laydinku aqoon jiray oo hadalka fura sidii curad lagu yaqaabay. Wiilkiina Mr.deni, hadaad korsateen waa wiilkiinii xaqbuu u leeyahay inuu idin hogaamiyo Laakiin xaq uma laha inuu dhaxalka wax ku yeesho. Hadaad dhasheen oo dhaxalka uu wax ku leeyahayna u sheega inuusan dhaqankiinii fiicnaa meelna kasoo gelin xanaaq dhaw iyo is macnays. u sheega midabada nalalka gawaarida haga midka ugu fiican inuu yahay casaanka ama guduudka. Labadaa arrimood inaad kala saartaan yaa laydinka fadhiyaa waxa lagu wada hadlayo oo loo fadhiyo waa masiir soomaaliyeed oo fadhiyo oo aan xabad iyo cunfi lahayn. Waxaan taladaas u diri lahaa boqorada, beel-daaje,garaadada,iyo naakhuudayaasha oo dhan. Walaalkiin gooni guure.
Markii adeer biixi kabihiisa iloobo oo uu ku tilmaamo filan waa, orodna ku tago Ethiopia waa arrin soo dhawayn mudan. Markay farmaajo diyaarad wada raacaana wuxuu la mid yahay gabar yar oo layska wato waa nin jeclaysi. Adeer meesha bahdilku ku jiro ma garan kartid waa dhaqan fog oo maxmiyadii ingiriiska laga dhaxlay.
Madaxweyne koonfureed ma ogola inuu Ethiopian oo ay ka jecelyihiin soo raacana ma ogola. Waa rag wanaagsan laakiin wakhtigaa bah-dilay.
Dadkan media'ha siyaabo khaldan bay wax noogu sheegaan inta badan, haduu qofka ay wax nooga sheegayaan dhimirka la'yahayna waaba kasii xag jiraa. Hadii ay run tahay wuxuu ka mid yahay 15'ka milyan oo gebi ahaanva xanuunsan oo ku nool soomaaliya. Waxaa ku jira xoogaa caadifad ah aragtidayda. Wuxuu dhulka soomaalida ugusoo hor maray hargaysa oo aan laga ogolayn maro buluug ah, xataa hadii gabar ninkeeda u gogosho. Waa nasiib daro xanuunka kusii kordhin karta hadaan lagasoo kaxayn sida ugu dhakhsaha badan. Wuxuu u baahan yahay in la hoos fariisiyo calankii buluugga ahaa haba iska dayacnaadee inta noloshiisa uga hartay.
Ethiopia waxay aqoonsatahay midnimada soomaaliyeed snm ma jirto dawlad aqoonsan oo dunida ku taal Haduu doono eray munaafaqadaysan ha noqdo Snm waxay iska dhigaysaa inay hurudo aydoo ogol in la qaawiyo markay Ethiopia jawaabteedu ku timaado.
La yaab malaha wariye aan shaqo ahaan usoo baran shaqadiisa iyo TV lagu furay ma ii jeedaa iyo nalka igusoo jeedi. Waxaa kaliya oo layaab leh nin aaminsan in soomaaliya aysan lahayn (Country sovereignty ) hadana xusbi siyaasadeed furtay macnihiisu wuxuu yahay?!! Hadii aad aaminsantahay in wadanka xalane laga xukumo ayna dhici karto in wax ka jiraan hadalkiisa soo ma'ahayn inuu dalkiisa ama qalin ku xoreeyo ama qori muxuu xusbi u furtay asagoo aaminsan in dalku gumaysi ku jiro? Su'aashaas jawaabteeda waxaa weeye markii aan madaxweynaha si un ku diido dalka waa la gumaystaa. Hadii aan si un ku raacana xor baan nahay xaqna ma ahan in nala fara geliyo. Munaafaqnimadan waxaa ka fiican In qabiilaysi loo wada tukado intaan alle la hor istaagi lahayn garbo isku qabasho been ah.
Aragtidayda. Khayre wuxuu qaatay shaqadii oo dhan, asagoo sii qaatay tii madaxweynaha tii baarlanaanka iyo tii xukuumadiisa, cidnaba waxba uma reebin. lugta jeeniga waa la dhawayn karaa laakiin lama dhaafin karo. Booskii baarlamaanka wuxuu ku badelay maamul goboleedyada oo la hoos geeyay wax kastoo aan sharci ahayn asagoo isticmaalaya nadaamka ZOOM'ka ama fogaan aragga cusub. Farmaajo wuxuu isu ekaysiiyay oday dhaqameed shirkii dhuuso-mareeb markuu arkay in furayaashii oo dhan la xaday. Waxa deg-degga keenay waa arrintaas aragtidayda waa dab-demis. Macno malaha ku darsasho kooban oo qof iyo cod lagu gaaro, samirkeedana lama waayin, laakiin waxaa u muuqatay fursad ama cantuugo fiican oo ku dhex jirta kala fogaanshaha dawadaha soomaaliya ka dhisan. Arrintaan xusbiyada. Waxaa la arki jiray, xusbi doona qof iyo cod una shaqo taga siday shacbiyad badan dalka oo dhan uga samaysan lahaayeen Balse xusbi doonaya doorasho dadban nacnihiisu waa doorkeena 4.5 ku yuu na dhaafin, wayna garanayaan inaysan cod shacab waligood kusoo baxayn sida odorusku u muuqdo. Tan beesha caalamka Waxaa gadaal ka riixaya dawladaha diidan turkiga oo waayar ku talaashay reer yurub. Waa shaqo soomalidu magac ahaan un ugu dhex jirto.
Miskiin Odaygaan da'ahaan waa ka wayn yahay siyaad barre wuuna lasoo shaqeeyay dawladihii hore waa waayo arag xigmad la'aan ku khaatumo seegay. Wuxuu u qaabilsan yahay snm madaxa golaha guurtida oo aan waligood dhicin.
Odweyne Dhaqanka soomaalidu waa isku mid mid gaar u ah waqooyi ma jiro. Hadalkku Mar waa oraah Mar waa sarbeeb Mar waa kaftan Mar waa sheeko Mar waa waano Mar waa murti Mar waa maaweelo Mar waa wacdi Waa ilaa maashaa-alaah lamasoo loobi karo. Odayga hadalkiisa kaftan buu adiga kula yahay si aad adeer u ag fariisato. Hadalka odayga nuxurkiisu waxa weeye, wax un ha la sameeyo si jar iska xoornimo ah oo aduunku noogusoo jeesto Hadaan doono carabta aan lasii murano ha lays waydiiyo maxay kuwani Shiibaha aan la dagaalno si loo dhaho snm dad baa uga dhintay dagaalkii shiinaha. Aakhirka hadaan doon aan dhar dhigano si loo dhaho dad baa aqoonsi u waashay Ma intaas yaad ka akhrin wayday adeerkaa saleebaan gaal?
Maamul goboleedku wuxuu doonayaa barlamaan muqdusha iska jooga oo aan wax ilko ah lahayn. Hadii cod la qaado oo aqlibiyad lagu kala baxo ma ogola go'aankooda, waligoodna ma yeelin, mana khuseeyo. Sharciga ay jabinayaan bay hadana asagii dacwo ka yihiin numberkiisa 54aad. Waa la ogyahay in baarlamaanka laqdamo badan ka buuxdo, laakiin waa inaan la inkirin inuu yahay hooyada dhasha madaxda la eedaynayo. Madoobe oo ugu liita yaa baarlamaan ku dhistay sadex odoy ii keena midkaan jeclahay baan kala bixiye. Puntland sadexda jufo yaa door ku kala sugta afartii sano mar, baarlamaankuna waa ma hadle aan indhaha si fiican wax uga arkin. Hir-shabeele gudoomiyaha baladwenye haday badesho dhiig badan yaa ku daata ama waaba ka owood badan yahay odayga loo dhiibay. Gal-mudug waa gobol iyo nus bil gudaheed toban shaati oo kala midab ah tolan kara. Koonfur galbeed waa gobolo aad u wayn ayagoon kala aqoon intay xukumaan yaa wakhtigoodu baydhabo ku dhamaadaa. Shacabkeenu waa xanuunsanyahay, cudurkiisana gudaha dalka waxba loogama qaban karo.
Siyaasad Seedi Ma Taqaan
Nabadoon xaad hal kalmada lagama maqal inta wiilkooda khayre u joogay 4 sano ku dhawaad. Berigii hore maalin kama soomi jirin siyaasadda xalay saqdii dhexe buu siyaasadii u saxuurtay mar kale Khayre soomaalida cusub wuxuu u yahay halyay qaran. Oday dhaqameedkana wuxuu u fadhiyaa booskii qanyare.
Politics in the end is a drama of collision of wills احمد خالد Aragtidayda Siyaasada ra'yi mooyee waxba kama aqaan Khayre layskuma hayo inuu shaqo fiican qabtay mustaqbal fiicana ku leeyagay dalka. Waxaan u malaynayaa inuu mar qudha wareejiyay giraanta doonta laga wado, gaar ahaan markuu kasoo noqday Qatar. Waxay ahayd wakhtiga kala guurka inuu talaabadiisa qiyaaso xataa haduu doonayo inuu goonidiisa u istaago. Si kastaba waxaan u rajaynayaa nasiib wanaagsan maantay waa siyaasi khibrad badan.
Dagaal beeleedku sidan ayuu ku bilaamaa..
Hadii 80 jirka hadlaya uuna waligiis arag labada beelood oo wax kala galeen. Waxay ahayd inay reer laas-caanood madax dhiibtaan sababtoo xeer fiican baa ka dhaxeeyay. Ma naqaan xaqiiqda laakiin dhinaca hadlay warkoodu waa gar waana cad yahay. Dilka waxaa lagu fuliyaa jufada hoose sababtoo ah lama kala saari karo hadii dhiig dhex maro. Magta waxaa kala qaata beelaha kala fog sababtoo ah magta waxaa qayila beeshoo dhan, ka dibna waxay raadiyaan nin ay dilaan si beesha kale markeeda u qayisho.
Dadka laga tirada badan yahay waa la dulmay runtii, xataa waxaan arkay qaar baal shimbireed madaxa ku xirtay ciil dartiis. Si kastaba, in gabar loo gacan qaado dhaqan ma'ahan, baryahaan waxaa soo batay dumarka lagu xad gudbayo. Mujtamac hadaad doonayso inaad aragto quruxdiisa waxaa la eegaa dumarka iyo caruurta waana labada snm laga celin la'yahay.
Waqooyiga soomaaliya gacanka khaliijka carabta kuma jiro. kamana hodansana koonfurta, macluumaadka ha layska saxo marka hore. Waa dhul nabadeed oo dad wanaagsan dego qof kastoo soomaali ah uu si gaara u tagi karo. Markaad tagto waxa snm idin dhex mari kara waa un hadal, hadii hadalku dhib kuu keenayo dantaada yaa laga raacdaa. Qof dawlad la jooga iyo qof beel kale dhulkeeda jooga isku hadal ma noqon karo siiba hadii beeshu xanuun gaara tirsanayso. Waxaa hadalkayga markhaati ka noqon kara tahdiidka Dr.oodweyne oo snm ugu aqoon badan uu faqashta hargaysa iyo burca joogta ku hayo. Reer SSC miyaan lagu dhex dhuuman karin mise qudhoodu waa marti?